अमेरिकाको चुनावमा कति खर्च हुन्छ? - BBC News नेपाली
24 दिन पहिले
अमेरिका निर्वाचन २०२०: चुनावी अभियानमा कति खर्च हुन्छ? त्यो रकम कहाँबाट आउँछ?
३१ अक्टोबर २०२०
अमेरिकामा निर्वाचन हुनुभन्दा एक-दुई वर्षअघि नै चुनावी अभियान र सुरु हुन्छ। अनि त्यसमा अर्बौँ डलर खर्च हुन्छ।
कोरोनाभाइरस महामारीले यो वर्षको निर्वाचन चक्र केही फरक देखिएको छ। तर नोभेम्बर ३ मा हुने मतदानअघि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ।
सन् २०१६ को निर्वाचन अभियानमा झन्डै ६.५ अर्ब डलर खर्च भएको अनुमान गरिएको छ।
त्यो खर्च कसले बेहोर्‍यो? अनि यसपालि कति खर्च होला त?
अमेरिकी चुनावको मत सर्वेक्षण कति विश्वासिलो
आप्रवासी मतदाता जसले अमेरिकी निर्वाचन छिनोफानो गर्न सक्छन्
यसवर्षको अमेरिकी चुनाव खर्च ऐतिहासिक ! ट्रम्पको ‘रातो-क्याप’मा मात्र ८० लाख डलर लगानी
नेपालमा कोभिड-१९ खोप दिन 'अर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक', कसले बेहोर्छ खर्च - BBC News नेपाली
बीबीसी नेपाली3दिन पहिले
काठमाण्डाै – अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनाव निकै महँगो पर्दै गएको छ । सन् २०१६ को चुनावमा झण्डै साढे छ अर्ब डलर खर्च भएकोमा यो वर्ष त्यो खर्च अझै बढ्ने बीबीसीले जनाएको छ । अमेरिकामा चुनाव हुनुभन्दा दुई वर्षअघि नै चुनावी अभियान सुरु हुन्छ । यस्ता अभियानहरु निकै महँगा हुने गरेका खबरमा उल्लेख छ । विगतका पाँचवटा चुनावमा ...
उज्यालो अनलाइन 24 दिन पहिले
२०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इतिहासकै महँगो
वासिङटन-यस वर्ष अमेरिकामा हुन लागेको राष्ट्रपति चुनाव इतिहासकै महँगो हुने भएको छ । यो चुनावमा अघिल्लो चुनावमा भएको खर्चको तुलनामा दोब्बर बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो वर्ष करिब १४ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अनुसन्धानमुलक समूह ‘द सेन्टर फर रेस्पोन्सिभ पोलिटिक्स’ ले मतदानभन्दा अघिको अन्तिम महिनामा भएको चन्दा वृद्धिका […]
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ०१ पैसा रहेको छ । यस्तै, युरो एकको खरिददर १२७&nbsp;रुपैयाँ ३३ ...
नेपाल आज मंसिर २०७६
चीनको सञ्चित विदेशी मुद्रा ३१ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलर
चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चयको कुल ३१ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको चीनको राष्ट्रिय विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ब्यूरोले जनाएको छ। ब्यूरोद्वारा उपलब्ध गराइएको तथ्यांकमा भनिएको छ, 'सन् २०१९ को मेको अन्तसम्म चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चय ३१ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो अप्रिल महिनाको अन्त्यसम्मको तुलनामा ६ अर्ब १० करोड ...
थाहा खबर बैशाख २०७६
नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७५
शिखर वार्ता क्रममा दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलको बसाइ, खानपिन र सञ्चार व्यवस्थापनमा उक्त खर्च हुने अनुमान गरिएको हो। यसबाहेक झन्डै १ करोड डलर सुरक्षामा खर्च हुने सिंगापुर प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
यसपालिको बजेट धान्न १ खर्ब ७३ अर्ब कमी, १ खर्ब ६ अर्बका नयाँ घोषणा - Naya Patrika
Naya Patrika पौष २०७४